Dumarka Xiliga aad sidaan ku aragtid Waa Baashaal doon-Sirta Dareenka | shumis.net
Home » Galmada barida » Dumarka Xiliga aad sidaan ku aragtid Waa Baashaal doon-Sirta Dareenka
Markaan Leenahay dumarka xiligaan jooga waxaan ka wadanaa dumarka waqtigaan aduunka jooga qaasatan kuwa dhalinyarada ah kuwa jiraan haweynka waa weyn waayo qarni walba waxaa soo baxa dumarka kuwii hore ka duwan waxaan hada la oran karaa dumarka hada jooga waa kuwii ugu il baxsan dumarkii hore ee aduunka soo maray taas waa fikrada xogcusub ee taada mahan aqristae.
Dumarka xiligan jooga waxaa ay ka jecelyihiin raga guska weyn kuwa guska yar markaan sidaas leenahay waxaa la is oran karaa sidee ay arintaa ku dhici kartaa waa dhici kartaa waayo wax kasta waa ay dhacaan sidaas la soco.
Haweynka hada joga ma jecla inta badan ninka guska weyn waayo dumarka hda jogaa ma ahan kuwo sidaas u ad adag waa kuwa jil jilacsan oo ma jecla guska weyn waxaa ay ka jecelyhiin in loo raxeyo oo kaliya.
Raaxada dumarka ama dareenka haweynka kuma jiro qeybta hoose ee siilka ee waxaa u ku jiraa afka hore ee siilka marka sidaas ayee u jecladeen raga guska yar waayo afka hore ayuu ku jiraa dareenka dumarka.
Title: Dumarka Xiliga aad sidaan ku aragtid Waa Baashaal doon-Sirta Dareenka
Posted by Unknown, Published at August 22, 2016 and have 0 comments